कृषक ऋणको भारी बोक्दै : उत्पादनले बजार पाउन सकेन | कृषि टुडे
कृषक ऋणको भारी बोक्दै : उत्पादनले बजार पाउन सकेन
कृषि टुडे आइतवार, बैशाख ७, २०७७
रतनकुमार महतोको गोठमा चार वटा भैंसी थिए। लकडाउनले भैंसीलाई दानापानी जुटाउन समस्या भयो। उनले बाध्य भएर घाटा लगाई दुई वटा भैंसी बिक्री गरे। भैंसीको दूध डेरीमा उनलाई पुर्‍याउन कठिन छ। उनीसँग अहिले गोठमा दुई वटा दूधालु भैंसी छन्।
‘लकडाउनले बजार बन्द भयो। पशु आहार दाना पाइएन। भुसा, पराल छैन। भैंसी पाल्नै सकिएन। बाध्य भएर सस्तोमै भैंसी बिक्री गर्नुपर्यो’, उनले भने। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१२ परोरियाका दूध किसान रतन कुमार भन्छन्, ‘दूध लिएर डेरी सम्म आउँदा प्रहरीले कुट्छ, मोटरसाइकल खोसिदिन्छ। धेरै अप्ठ्यारो भयो।’
टनेलमै सड्यो च्याउ
लकडाउनले बजार बन्द हुँदा किसान मारमा छन्। उत्पादित सागसब्जी बारीमै कुहिराखेको छ। दूधले बजार पाएको छैन। गाउँमा दुग्धजन्य पदार्थ दूध, दही, घ्यू फालाफाल छ। उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान पिरोलिएका छन्। उनले भने, ‘उपभोक्ताले बजारमा नपाउँदा भान्छामा सागसब्जी पाक्न सकेको छैन, दही, दूध खान सकिरहेका छैन।’
च्याउ किसान रामकृष्णको टनेलमा च्याउ राम्रै फलेको थियो। मनग्गे आम्दानी हात पर्ने भन्दै उनी दंग थिए। जब च्याउको उत्पादन सुरु भयो, तब देश लकडाउन भयो। च्याउले बजार पाएन। लकडाउनले गर्नु गर्यो, नफा कमाउने सोंचेका रामकृष्णा अहिले ऋणको भेलमा डुबेका छन्।
‘सरकारको समाचार सुनेको सुनै छु, तरकारी, दूद्य, खाद्यान्न बिक्री वितरण रोकिएको छैन भन्छ। यहाँ किसानलाई बाटोमा प्रहरीले हिड्नै दिदैंन’, च्याउ किसान रामकृष्णले भने, ‘प्रहरीसँग लुकेर किसानले उत्पादन बजार ल्याए पनि बिक्री गर्न पाइँदैन। कच्चा सागसब्जी बिक्री भएन भने पाल्नै पर्छ, त्यसको माइबाप कोइ छैन।’
गौशाला नगरपालिका– १२ कान्तिबजारका किसान बुधन महतो लकडाउनले पिरोलिएका छन्। उनको एक विघामा खेती गरिएको करेला र बोडी फल्न थालेको छ। ‘बन्दीमा कहाँ लाने? बजार बन्द छ। कसरी बिक्री गर्ने? गाडी चल्न दिएको छैन। कसले किन्छ, बडो बिजोग भयो’, उनले भने, ‘बैंकबाट अढाई लाख रुपैयाँ ऋण लिएर तरकारी खेती गरेको छु । बिक्री भएन भने कहाँबाट ऋण तिर्ने ? ’ लकडाउनले किसानलाई क्षति नै क्षति भएको उनले पीडा पोंखे।
दूध संकलन केन्द्रका व्यवस्थापक रामदयाल महतोका अनुसार, आवतजावतकै समस्याले गाउँको दूध डेरीसम्म किसानले पुर्याउन सकेका छैनन्।‘ किसानलाई भुक्तानी गर्न पनि समस्या छ। बैंक खुल्दैन, कहाँबाट भुक्तानी गर्ने डेरीले उत्पादन गर्ने दही र घ्यु थन्किएको छ ।
शम्भुका छिमकै तरकारी पसले पपुकुमार साह भन्छन्, ‘अनि उपभोक्ताले कसरी तरकारी पाउँछन्? ’
किसान नेता रामचन्द्र कुश्वाहाले किसान धेरै समस्यामा भएको बताए। बजारमा खान नपाएर समस्या छ। किसानको खेतमा बर्बाद भइरहेको छ। एक अर्कासँग लिंक जोड्नु पर्ने आवश्यकता छ। सरकारले बजार व्यवस्थित बनाएर किसानको उत्पादन उपभोक्ताको भान्छासम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
Tags: #च्याउ #तरकारी #बजार
Previous के हो सपोटा फल ? कसरी गर्ने नेपालमा यसको व्यवसायिक खेती?
Next लकडाउनमा कृषकहरुलाई छैन फुर्सद